के हाे महिलाहरूले प्रयाेग गर्ने महिनावारी कप ? – हाम्राे पिपलबाेट
के हाे महिलाहरूले प्रयाेग गर्ने महिनावारी कप ?
प्याड प्रत्येक चार घण्टामा फेर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र संक्रमण हुन्छ। नेपालमा महिलामैत्री शौचालय नहुँदा र कामकाजी महिलाको लागि प्याड त्यति सहज छैन। प्याडलाई पाँच, छ घण्टा बढी समय प्रयोग गरियो भने अक्सिन र रगत मिलेर प्याडमा किटाणु बन्छ र जसले संक्रमण निमत्याउँछ । प्याड फेरेपछि फाल्ने ठाउँ नहुँदा पनि प्याड दिनभर राख्न बाध्य हुन्छन्।
सेन्टरका अनुसार यी साधनहरुको तुलनामा कप आर्थिक, वातवरण र स्वास्थ्यको लागि उचित भएको सेन्टरले औंल्याएको छ। महिनावारी कप एक पटक किनेपछि दश वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्याड वर्षेनी हजारौं रुपैयाँको किन्नुपर्दा खर्चिलो भएको कप दुई हजारमा किनेर दश वर्षसम्म किन्नु पर्दैन। यो आकार र तौलको हिसाबले सानो भएकाले महिलाले जहाँ पनि सँगै लान सक्छन्। कप मेडिकल सिल्कनले बनेको हुँदा यो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छैन।
कपलाई योनीभित्र राख्न सकिन्छ। पहिलो पटक राख्दा केही अप्ठेरो हुन सक्छ। तर त्यसलाई सामान्य रुपमा लिनुपछ । यी कप एक पटकमा ८ देखि १२ घण्टासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। बढी रक्तश्राव भएका बेलामा भने एक पटकमा चार÷पाँच घण्टामै निकाल्न सकिन्छ। निकालेर विषेश प्रकारको साबुनले पखालेर पुनः प्रयोग गर्नुपर्छ। कपको प्रयोग गर्दा पिसाब फेर्न समस्या हुँदैन। प्याडको प्रयोगमा भने यो सम्भव हुँदैन।
Author HamropipalbotPosted on २२ जेष्ठ २०७५ June 6, 2018 Categories समाचार, स्वास्थ्य
Previous Previous post: पेलेको संन्यासपछि चौथोपटक विश्वकप जित्‍न ब्राजिलले २४ वर्ष कुर्नुपर्‍यो
Next Next post: जागिरको विज्ञापन गर्दै बेरोजगार युवा ठग्ने धन्दा, प्रहरीमा उजुरी नपुग्दा ठग्नेहरुको मनोबल बढ्दो